Suldaan Maxamed Yuusuf oo ka tacsiyadeeyay geerida Beeldaaje Faarax X.Cabdilaahi. – Radio Daljir
Suldaan Maxamed Yuusuf oo ka tacsiyadeeyay geerida Beeldaaje Faarax X.Cabdilaahi.
Viena, Apr 09 -Suldaan Maxamed Yuusuf Cabdi oo ka mid ah issimada kasoo jeeda deegaanada Puntland ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Beeldaaje Faarax Xaaji Cabdilaahi oo xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Imaaraatka Carabta.
Suldaan Maxamed Yuusuf oo isagoo ku sugan wadanka Austria ee qaaradda Yurub lasoo xiriiray Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay, beeladaaje Faarax Xaaji Cabdilaahi inuu kaalin muhiim ah uu u ahaa nabaddaynta beelaha Puntland.
“Waxaa uu ahaa nin aad u macquulsan, aadna u jecel in hadalka macaan iyo kan qiimaha leh in la isyiraahdo, waxaa uu ahaa nin aad u aamus badan, nin kelimad macaan, ehlu diin ah, ” ayuu yiri Suldaan Maxamed Yuusuf Cabdi.
Geerida Beedaaje Faarax Beeldaaje Xaaji Cabdilaahi ayaa waxaa sidoo kale ka tacsiydeeyay masuuliyiin ka tirsan dowladda Puntland iyo qaybaha kale duwan ee bulshada.